A machibidoro ihe karịrị mmadụ asatọ na nnọkọ ọha na eze na mmemme ọha na eze
Site na November 24, ihe ruru mmadụ asatọ nwere ike isonye na nnọkọ ọha na eze na Sweden. Mmachibido iwu ahụ dị irè maka izu anọ.
Foto dị na nke TV na svt ohuru si ọchịchị pịa ogbako.
Anyị bi na a nsogbu ma na a amụma oge. Ugbu a, ọ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla ibi nso na Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na ịnabataghị ya, mee ya ugbu a tupu oge agaa.
Gọọmentị na Prime Minista Sweden Stefan Löfven enweela mkparịta ụka dị egwu banyere ụkpụrụ ọhụrụ maka ọrịa oria na-efe efe.
"Ọnọdụ dị na mba anyị dịtụ mgbagwoju anya, mana dịkwa mfe: Anyị na-ebi n'oge ikpe. Ọ ga-aka njọ. Mee ọrụ gị, buru ọrụ gị ịkwụsị mgbasa ọrịa," Stefan Löfven na-ekwu.
Stefan Löfven si otú a na-ekwu na ọ ga-aka njọ, nke ọ kwughachiri ọtụtụ ugboro na pịa ogbako.
Oke mmadụ asatọ
"Taa, m nwere ike ịkpọsa na a ga-atụ aro na site na 24 Nọvemba ihe ruru mmadụ asatọ nwere ike ịga nzukọ ọha na eze na mmemme ọha na eze. Nke a bụ usoro mkparịta ụka. nke mere na anyị nwere ike ibelata mgbasa nke ọrịa ", kwuru, sị Stefan Löfven.
Mmachibido iwu a ga-etinye ma ọ dịkarịa ala izu anọ site na 24 November, mana enwere ike ịgbatị ya.
Jn 1: 12-13. Ma ka ha ra, bú ndi nabatara Ya, ndi ahu ka O nyere ikike iburu umu Chineke, bú ndi kwere n'aha-Ya. Ndi amuru, obughi site n'ọbara, ma-ọbu site n'ọchichọ anu-aru, ma-ọbu site n'ọchichọ nwoke ọ bula, kama site n'aka Chineke.
Christer Åberg na a ndụ update.
Vecka 49, tisdag 7 december 2021 kl. 15:51